Nge-20 kaJuni ukuya kwi-20 ukuya kwi-Jizhong Iqela lahamba ne-VIV Yurophu ye-2018 e-Utrecht, eNetherlands
Ngexesha le-3 kaNovemba ka-2017 ukuya nge-8 kaNovemba ka-2017 abahloli kwiBhodi yamaZwe kunye neeBhodi zePisisi (NMPB)
ngu admin nge-20-03-06
Nge-20 kaJuni ukuya kwi-20 ukuya kwi-Jizhong Iqela lahamba ne-VIV Yurophu ye-2018 e-Utrecht, eNetherlands. Ujoliso lweendwendwe ezingama-25,000 kunye neenkampani ezibonisa ezingama-600, iVIV Europe ngowona msitho uphezulu womsitho wezempilo wezilwanyana emhlabeni. Kwangelo xesha, amanye amaqela eqela lethu athabathe inxaxheba kwi-CPhI China 20 ...
Nge-20 kaJulayi ngo-2016, usekela-Mphathiswa we-Ofisi yeZolimo u-Yu Kangzhen kunye noSekela Mlawuli-Jikelele we-Veterinary Bureau Xiang Chaoyang batyelele indawo yethu entsha yokuvelisa eQingyuan, kwisixeko saseBaoding. Usekela-Mphathiswa u-Yu uchaze ukuba njengomnye wabavelisi bezilwanyana abakhulu, iJizhong Pharmaceut ...
Ngexesha le-3 kaNovemba ka-2017 ukuya nge-8 kaNovemba ka-2017 abahloli abavela kwi-National Medicines & Poisons Board (NMPB), eSudan, baqhube uphicotho lwe-GMP eBaoding Sunlight Herb Medicament Co, Ltd, enye yeefektri zeBaoding Jizhong Pharmaceutical Group. Ngomzamo womzi mveliso wonke, ...